Tag: hashtag kutsvaga | Martech Zone
Tag: hashtag kutsvaga
Isu takanyora nezve inoshamisa magariro midhiya ekuraira nzvimbo uye nhandare inoratidzwa inofambiswa naPostano, anotsigira ino saiti. Postano ndiyo ipuratifomu yatinoshandisa kugadzirisa yedu tsoka yetsoka iyo inoratidza zvinyorwa zvekutaura kwevatsigiri vedu mumasocial media. Postano yakaenderera mberi nekugadzira zviono zvekushambadzira zvinoonekwa mukuburitswa kwavo kutsva, nekukurumidza ichiva chikuva chinotungamira chekuratidzira zvemukati zvigadzirwa zvemitambo, fashoni, zvigadzirwa zvevatengi, varaidzo, kufamba, uye kushambadzira.
Svondo, Ndira 26, 2014 Douglas Karr
Kune avo venyu paTwitter, isu tichiri kutamba mutambo unoseka wevateveri venhema, muteveri SPAM, uye vanhu vanokutevera uye vasingateedzere iwe kuti vangoedza uye kukukwezva iwe kuti uvatevere ivo kuti vakure network yavo. Ini ndichiri kuda Twitter asi iyi ndiyo yakaipa chikamu chepuratifomu - ini handifunge kuti Twitter irikuita zvakakwana kugadzirisa mhando yepuratifomu. Chishandiso chandanga ndichishandisa kune vashoma